admin | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 1850
> ဘိုကလေးက နာဂစ် အထိမ်းအမှတ် သုဿန်မြေ တဧကနဲ့ စတင်ပြီမင်းစင်လင်း ဇွန် ၁၇၊ ၂၀၀၈ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်က ဓာတ်ပုံတွေမှာ ပါခဲ့တဲ့အတိုင်း ဘိုကလေး၊ ဓားပြချောင်းကျေးရွာအနီးမှာ နာဂစ်မုန်တိုင်းမှာ ပျက်စီးကြသူတို့ရဲ့ ကြွင်းကျန်ရစ်တဲ့ ရုပ်အလောင်းတွေကို မြုတ်နှံဖို့ မြေ တဧက ၀ယ်ပြီး စေတနာရှင်များက ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ တဧကကို ကျပ်ငွေ ၅ သိန်း ပေးရပြီး အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ World Concern, ICRC, Care Myanmar တို့က ကူညီပေးကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပထမ အခေါက်မှာ စေတနာရှင် ၁၂ ဦး၊ ဒုတိယ အခေါက်မှာ ၁၈ ဦး သွားရောက်ပြီး ရုပ်အလောင်းတွေ ကောက်ယူ မြှတ်နှံနေကြရာမှာ...
> ပြည်တွင်းက ဖတ်မိသမျှ ဂျာနယ် အပိုင်းအစများဂျာနယ်ဂြိုလ် သာဂိဇွန်လ ဒုတိယပတ် ၂၀၀၈ဇွန် ၁၆ ၂၀၀၈ သမိုင်းတွင်ကျန်ရစ်မည့် နာဂစ်မုန်တိုင်းကရေးလိုက်သည့် မှတ်တမ်းများနဲ့ မြန်မာဂျာနယ်များလို့ နံမယ်တပ်လိုက်ချင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် မြန်မာစစ်အစိုးရက ဖုံးဖိထားသည့်ကြားက သမိုင်းတွင်မည့် ဂျာနယ်များကပြောတဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်း မှတ်တမ်းများလို့ ဆိုရလေမလား … No tags for this post. Related posts No related posts.
> ဂီတ အနုပညာရှင် မာမာအေး ဂုဏ်ပြုတဲ့ အောင်ဆန်းစုကြည် – ၆၃ ရုပ်မြင်အစီအစဉ်မိုးမခဇွန် ၁၆၊ ၂၀၀၈ အပိုင်း ၃ ပိုင်း ခွဲပြီး မိုးမခ ဒေ့ါနက်မှာ (http://moemaka.net ) တင်ထားပါတယ်။ ဇွန်လ ၁၄ က ကျင်းပတဲ့ မြန်မာအမေရိကန် အမျိုးသမီးများ မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့ ၉ ကြိမ်မြောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ အခမ်းအနားမှာ ဒေါ်မာမာအေး တက်ရောက်တဲ့ အစီအစဉ်ပါ။ ပထမပိုင်းက အနုပညာရှင်တဦးက ဂုဏ်ပြုတဲ့ မွေးနေ့စကား ဒုတိယပိုင်းက မွေးနေ့ဆုတောင်းတဲ့ “ချမ်းမြေ့ပါစေ” သီချင်းလက်ဆောင် တတိယပိုင်းက ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအတွက် မာမာအေးရဲ့ လက်ဆောင် – မူလ နိုင်ငံတော်သီချင်း – ပရိသတ်နှင့်အတူ သီဆို သင်ပြ တင်ဆက်ပေးမှု...
> မိုးမခရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီ ဇနြ် ၁၅၊ ၂၀၀၈တိမ်ဦးလေေူပ – ဦးပန်တဵာသတင်းတိုထြာ၊ သီခဵင်းပဒေသာဆိံ္ဋခံယူပြဲအလနြ် – ရဲဘော် ဖိုးသံခေဵာင်းဓၝူးပ ဆိံ္ဋူပပြဲ၊ လူထုအော်သံ၊ ဒီဗြီဘီ၆၃ မြေးနေႚရငြ် ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည် ဂုဏ်ူပြူမန်မာူပည်လေဘေး ကူညီပေးနေသူမဵာူးခြံလဵက်နဲႛ ခဵမ်း၊ ဆုံလဵက်နဲႚ လမြ်း – တင်မိုးနတ်ရင်ြနောင် နောက်ဆုံးနေႚမိုးမခရဲႚ သတင်းတိုထြာမဵာူးမမန်းဂီရိ သီခဵင်း အစီအစဉ်စီစဉ်သူ – ဦးပန်တဵာ၊ နန်းဖောဆေး၊ စောအယ်လော No tags for this post. Related posts No related posts.
>Burmese Artist Mar Mar Aye & Overseas Burmese in the bay area mark 63rd Birthday of Aung San Suu Kyi
> တေးသံရှင် မာမာအေးနှင့်အတူ ဘေးဧရိယာက မြန်မာအမျိုးသမီးများကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၃ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အတူတကွ ကျင်းပမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ဇွန် ၁၆၊ ၂၀၀၈ အမေရိကန်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဘေးဧရိယာဒေသရှိ မြန်မာအမေရိကန် အမျိုးသမီးမဟာမိတ်အဖွဲ့က ကြီးမှူးကျင်းပသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၃ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်နှင့် မြန်မာပြည်က နာဂစ်မုန်တိုင်းသင့် ပြည်သူများနှင့်တကွ အဖိနှိပ်ခံ မြန်မာပြည်သူများ အားလုံးသို့ ဘာသာပေါင်းစုံက ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သသည့် အခမ်းအနားကို ယမန်နေ့က ဖရီးမောင့်မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ဘာသာရေး လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တကွ အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူများ၊ သဘာဝဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရသော စစ်အစိုးရပစ်ပယ်ထားသည့် မြန်မာပြည်သူများအားလုံး ဒုက္ခအသီးသီးမှ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ရေး ဆုတောင်းစကားများ ပြောကြသည်။ အခမ်းအနားသို့ အင်ဒီယာနာပြည်နယ်၊...
>Burmese Artist Mar Mar Aye & Burmese Women Overseas mark Daw Aung San Suu Kyi’s 63rd Birthday at the Bay
> (photo: AFP/2006) ဖြူဖြူသင်း ပြန်လာပြီ မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၃ဇွန် ၁၅၊ ၂၀၀၈ အေအိုင်ဒီအက်စ် ဝေဒနာသည်များကို ကူညီစောင့်ရှောက်သူအဖြစ် ထင်ရှားသည့် မဖြူဖြူသင်းသည် တစ်နှစ်နီးပါးတိမ်းရှောင်နေရာမှ ယခုအခါ ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာပြီး ပုံမှန်လုပ်ငန်းများ ပြန်လည် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ လူငယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ မဖြူဖြူသင်းသည် သူ့အား စောင့်ကြည့်ရန် တာဝန်ကျသည့် ဒေသခံ အာဏာပိုင်များထံ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းတို့က သူ့အား တိမ်းရှောင်ပုန်းအောင်းနေရန် မလိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် သြဂုတ်လအတွင်း နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်သော ထင်ရှားသည့် လူငယ်များ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရချိန်မှစပြီး မဖြူဖြူသင်းသည် လူမြင်ကွင်းမှ ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ မဖြူဖြူသင်းသည် လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်အတူ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါ ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေး၊ ပညာပေးရေးလုပ်ငန်းများကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှစပြီး...
> ကာတွန်းဘီရုမာ – အပြင်လူ မ၀င်ရ၊ အတွင်းလူ မထွက်ရဇွန် ၁၅၊ ၂၀၀၈Cartoon Beruma – Nobody IN and Nobody OUT No tags for this post. Related posts No related posts.
>Burma to build cyclone shelters in 500 villages
> ကျေးရွာပေါင်း ၅၀၀ တွင် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းဆောက်မည် ဆင်ဟွာသတင်းဌာန ဇွန် ၁၅၊ ၂၀၀၈ မြန်မာပြည်တွင် ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများကို ကျေးရွာပေါင်း ၅၀၀ တွင် တည်ဆောက်သွားမည်ဟု ဂျာနယ်တစ်စောင်တွင် ယမန်နေ့က ဖော်ပြလိုက်သည်။အဆိုပါဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းအတွက် ဒေါ်လာ ၁၅ သန်း ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်၊ မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာအသင်း(MES)၊ မြန်မာ့ဘူမိသိပ္ပံအသင် (GSS) တို့က ပူးတွဲ တည်ဆောက်သွားမည်ဟု GSS တာဝန်ရှိသူများကို ကိုးကားပြီး Voice ဂျာနယ်က ဆိုသည်။ အလားတူ စီမံကိန်းများ ရှိသော ဂျပန်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ပါကစ္စတန်၊ အိန္ဒိယတို့မှ ပညာရှင်တို့နှင့် နည်းပညာရေးရာများကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မည်ဟု ဆိုသည်။ ကျေးရွာတိုင်းတွင် ခိုလှုံရန်နေရာတစ်ခု၊ သောက်သုံးရေဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု၊ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းရှိသည့်အဆောက်အဦး (cyclone-resistant...
> မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်များအတွက် လှူဒါန်းမှုများ ဓာတ်ပုံသတင်း ဇွန် ၁၅၊ ၂၀၀၆ ယမန်နေ့က ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်တွင် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များ ရောင်းချလျက်ရှိသည်။ မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်များရန်ပုံငွေအတွက်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ (photos: AP) ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ နရာသီဝပ်ခရိုင်တွင်လည်း မြန်မာပြည်မုန်တိုင်း၊ တရုတ်ပြည်ငလျှင်ဒဏ်ခံခဲ့ရသော ဒုက္ခသည်များအတွက် အလှူငွေများကောက်ခံနေပုံကို သောကြာနေ့ (ဇွန် ၁၃ရက်နေ့)က တွေ့ရသည်။ (photo: AFP) No tags for this post. Related posts No related posts.
Page 1,850 of 1,946«1...1,8481,8491,8501,8511,852...1946»
>Burmese Band - Lazy Club to entertain Burmese in Fort Wayne